Hizara ny feon’ireo 50 mpikatroka ara-niomerika ho an’ny tenim-pirenena teratany ny hetsi-panentanana Twitter miodina mandritra ny taona iray · Global Voices teny Malagasy
Ity hetsika sosialy ity dia nentanin'ny hetsika toy ny @IndigenousX
Voadika ny 12 Mey 2019 6:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Español, English, Italiano, Français, Esperanto , Deutsch, Ελληνικά, English
Sary nafangaro noforonin'i Eddie Avila, nampiasa ilay sarim-boroana avy tamin'i Sara Novovitch, ES tao amin'ny Tetikasa Noun, ilay voluta avy tamin'i Jer Clarke, ary ny Word It Out avy amin'ny fandaharanasa word cloud.
Nanomboka ny Alatsinainy 14 Janorary, hanjaka ao amin'ny kaonty Twitter-n'ny @ActLenguas (Fikatrohana Ara-teny) ny lisitra mihodina an'ireo mpikatroka ara-niomerika ho an'ny tenim-pirenena teratany avy any Amerika Latina. Natao ao anatin'ny sehatry ny 2019-Taona Iraisam-pirenenan'ireo Tenim-pirenena Teratany ity hetsi-panentanana eny amin'ny tambajotra sosialy ity ary hanome toerana ireo feo isan-karazany manerana ny faritra mba hitantarana ny traikefany tamin'ny famelomana indray ny teny.
Mandritra ireo herinandro 50 manaraka, hisesy hizara ny fomba fijeriny mikasika ny dikan'ny tenin-drazany aminy sy ho an'ny fiarahamoniny ireo mpikatroka 50 samihafa. Miara-miasa avokoa ireo mpikatroka ireo mba hampiroboroboana ny fampiasana ny teniny any amin'ny sehatra vaovao toy ny Aterineto, izay ahitana fahafahana sy fanamby maro. Fa misy votoaty lehibe tsy an-tambajotra ihany koa ny fikatrohan'izy ireo, mifandraika amin'ireo tantara taloha sy ireo toe-javatra ankehitriny izay mikasika ny firehidrehitr'ireo tenim-pirenena teratany.
Nandritra izay dimy taona lasa izay ny Rising Voices (RV), nanamora ny fikatrohana ara-niomerika tamin'ny fanampiana ny fikarakarana famoriam-bahoaka sy atrikasa ary tamin'ny fanomezana famatsiambola kely sy fanohanana ho an'ireo tetikasa sasany tany amin'ny faritra. Asongadin'ny RV ihany koa ireo hetsika fisantarana ara-niomerika izay mitondra fanavaozana ao amin'ny tranonkalanay fametrahana ho an-tsarintany, nefa herverinay ihany koa fa tena zava-dehibe manokana ity hetsi-panentanana ity satria ireo manaraka amin'ny Twitter dia haheno mivantana avy amin'ireo mpikatroka tenany mihitsy.
Tena tsara be ny valin'ireo antso ho fandraisana anjara, efa feno sahady ny lisitry ny fihodinana voalohany tamin'ny volana Mey. Nosokafanay aloha ilay lisitra ho an'ireo olona nandray anjara tamin'ny iray tamin'ireo fivoriam-paritra, fandaharanasa famatsiambola kely, na hetsika hafa nataon'ny Rising Voices.
I Yásnaya Elena Aguilar Gil no vahinintsika voalohany, Mixe avy any Oaxaca. Mamakia bebe kokoa mikasika azy ao amin'ity mombamomba azy navoaka tao amin'ny RV ity, iray tamin'ireo tompon'antoka tamin'ilay hevitra ”fikatrohana ara-niomerika” i Yásnaya, niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy Tajëëw Díaz-Robles, izay hokarakaraina any am-piafaran'ny taona any, ho toy ny paikady mba hampiroboroboana ireo tenim-pirenena sy hisintonana mpiteny vaovao. Raha toa ka tsy hamaha amin'ny fomban'ny majika amin'izao fotsiny ny olana matotra mikasika ny fahaverezan-ny teny ny teknolojia sy ny aterineto, afaka mitàna anjara asa lehibe amin'ny paikady manerantany izany amin'ny famelomana indray ny tenim-pirenena.
Tamin'ny Oktobra 2014, rehefa niaraka niasa niaraka tamin'ny Tranomboky Juan de Córdova tany Oaxaca ireo vehivavy roa ireo, niara-niombona antoka tamin'ny Rising Voices tamin'ilay fihaonambe nasionaly voalohany indrindra nataon'ireo mpikatroka ara-niomerika ho an'ny tenim-pirenena teratany izy ireo, izay namory olona mihoatra ny 30 nanerana an'i Meksika ho an'ireo telo andro nianarana sy nifanakalozana. Noforonina taorian'io fihaonambe io ny tambajotra any an-toerana mba hifanohanana sy hifankaherezana. Avy ao anatin'ny lisitr'ireo mpikarakara ilay hetsi-panentanana amin'ny tambajotra sosialy @ActLenguas daholo ny ankamaroan'ireo olona nandray anjara tamin'ity hetsika voalohany ity.
Taorian'izany fihaonana izany, niforona tany amin'ny firenena toa an'i Bolivia, Però, Kolombia ny tambajotra nasionaly maro ary koa tetikasa eo an-toerana mifototra amin'ny teny iray na maro ao amin'ny faritra iray manokana. Voasolo tena tsara ao anatin'ity hetsi-panentanana mandritra ny taona iray ity ihany koa ireo olona avy amin'ireo tetikasa ireo.
Fo mampiaina ireo tambajotra ireo ny tantaran-dry zareo manokana, ny asa mafy vitany ary ny fahafoizan-tenany. Tsy andrin'ireo olona ireo izay hizaràna ireo tantara ireo amin'ny olona tsy dia tena mahafantatra ireo tenim-pirenena teratany any Amerika Latina, ary miaraka amin'ny vondrom-piraharamonina teratany sy mpikatroka hafa ihany koa izay hahita ao anatin'ireny tantara ireny ny akon'ny zava-niainany, fa hianatra ihany koa ampahany hafa amin'i Amerika Latina sy ny toejavatra hafa momba azy tsy manam-paharoa.
Ireo mpandray anjara nanao sonia mba hitantana ilay kaonty, ahitana an'i:
Simona, Mapuche iray mpianatra efa nahazo diplaoma ka manomana ny maripahaizana doktorà amin'ny tenim-pirenena
Leonardy, Wayuu Wikipediana izay mitady fomba hizaràna fahaizana amin'ny teniny
Rodrigo, Zapotec mpikaroka, mpitarika tetikasa mifandraika amin'ny fikatrohana ara-niomerika
Ruben, Aymara mpanoratra tononkalo iray izay vao haingana no namoaka boky nahazo loza tamin'ny teniny
Sasil, Maya mitantana fizarana iray ao amin'ny gazetiny ao an-toerana izay mitatitra vaovao amin'ny tenin-drazany
Misael, Triqui iray, sy Netza, Mixtec iray, samy vonona ny hanao izay hisianà rindrambaiko ho afaka vakiana amin'ny tenim-pireneny
Ampahany ihany ity tamin'ireo olona maro eo anivon'ity hetsi-panentanana natao hizarana tantarana asa mafy mifandraika amin'ny tenim-pirenena ao Amerika Latina ity. Jereo ilay pejin'ny hetsi-panentanana mba hahitana ny fandaharam-potoana ankehitriny ary mamakia tsy tapaka ho an'ireo lahatsoratra am-blaogy miaraka amin'ny mombamomban'ny mpampiantrano tsirairay.
Ity hetsika sosialy ity dia nentanin'ny hetsika toy ny @IndigenousX any Aostralia, izay ny mpamorona azy, i Luke Peason dia nanome torolalana lehibe nandritra ny fitarihana ireo dingan-drafitra. Mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina, manaraka lisitra mihodina ihany koa, no mitantana ny kaonty Instagram-n'ny Global Voices ary fomba tsara hahazoana ireo mpikambana isan-karazany ary ny toerana iainan'izy ireo.
Na saika amin'ny teny Espaniola aza ireo bitsika ireo amin'ny ankapobeny ary ireo tenindrazana no asongadina, mitrandraka fomba hafa hitantanana sy handikàna hafatra fototra mba hanelezana be hatrany ireo tantara ireo izahay. Afaka manohana ity hetsi-panentanana ity ianao amin'ny fanarahana ny kaontin'ny @ActLenguas mandritra ny taona 2019 iray manontolo ary amin'ny famerenana mibitsika ireo hafatra mahaliana anao. Tsy andrin'ireo mpampiantrano ihany koa ny hahazo fanehoankevitra ary hanao izay vitany mba hamaliana izany.